Tenisy ambony latabatra: 200 ny mpilalao andrasana amin’ny “Open Mada” | NewsMada
Tenisy ambony latabatra: 200 ny mpilalao andrasana amin’ny “Open Mada”
Hanomboka rahampitso asabotsy 17 novambra ary hitohy hatramin’ny alahady 18 novambra, eny Mahamasina, ny fifaninanana mitondra ny anarana hoe “Open de Madagascar”, taranja tenisy ambony latabatra. Andrasan’ny mpikarakara ho tonga handray anjara amin’ity fifaninanana ity ny mpilalao miisa 200 eo.
Efa vonona amin’ny fandraisana ny lalao, ny faran’ny herinandro izao, ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny taranja tenisy ambony latabatra. Lalao efa mamarana sahady ny taom-pilalaovana 2018. Etsy ankilany, efa saika tonga nisoratra anarana hilalao avokoa ireo mpilalao kalaza eo amin’ity taranja ity. Hatreto, efa nahatonga solontena ny mpilalao avy eo anivon’ny Jovenna, ny JPP ary ny avy any amin’ny ligin’i Moramanga. Mbola maro ihany koa ireo andrasana, raha ny fanazavana nentin’ny avy eo anivon’ny federasiona malagasy ny tenisy ambony latabatra, tarihin’ny filohany, Ambinintsoarivelo Jean Herley. Mbola mahazo tonga eny an-toerana ihany koa ireo maniry handray anjara hatramin’ny asabotsy hariva, andro voalohan’ny fifaninanana.
Marihina fa notsinjaraina ho sokajy roa ny fifaninanana: ho an’ny sokajy “open” lahy sy vavy mifangaro ary ny sokajy “vétérans”, ho an’ny mpilalao maherin’ny 40 taona. Fifanintsanana mivantana ny hitranga mandritra ny andro voalohany, ny asabotsy 17 novambra. Izany hoe, mihintsana avy hatrany izay mpilalao resy mandritra ny fifanandrinan’ny mpilalao roa tonta. Natao izany hanafainganana ny lalao noho ny habetsahan’ny mpandray anjara. Ny alahady 18 novambra ny hanaovana ny famaranana sy ny fizarana ny amboara ary ny mari-pankasitrahana ho an’ny mpilalao mendrika isan-tsokajiny.
Hotanterahina ao amin’ny efitrano lehibe ao Mahamasina ny lalao ary efa vonona handraisana ireo mpilalao miisa 200 ireo ny latabatra filalaovana maromaro. Azo lazaina ho efa tomombana ny fikarakarana rehetra amin’ity fifaninanana ity ary ezahina ny haha matihanina hatrany ny lalao, raha ny nambaran’ny mpikarakara.